एक नाथे नारीवाद, दुई नाथे नारीवाद – बाह्रथरी कुरा
एक नाथे नारीवाद, दुई नाथे नारीवाद
July 23, 2017 By Boston बाह्र सत्ताईस कुरा, समाज, सामाजिक सञ्जाल
फोटो सौजन्य: द टेलिग्राफ
पाठकवृन्द, नमस्कार ! हेर्नुस् न चुनावमा भोट माग्न आइपछि हराको हराइ भइयो। प्योर नेता इस्टाइल, भोट माग्यो अनि गायब। क्यारुम् त नि, फुर्सतै भएन दिमागलाई। कुरो के भन्देखुन्लाई, अलि अघि (एक हप्ता भयो?) एउटा अनलाइनमा एउटा ब्लग छापिएको थियो ‘एक नाथे सरला, दुई नाथे वन्दना’ शीर्षकमा। मेरी आमोई नि, त्यो ब्लग छापिएपछि कतिका लंकामा आगो लागेजस्तै भओ। पछि अनलाइनका सम्पादकले माफी मागेर लेखको पत्ता काटे। तर अनेक काण्ड झेलेका, लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जालमा आर्टी खेतीमा उच्चतम सफलता हासिल गरेका सम्पादक नारीवादको नाथमा च्यापिए। हाम्रो मुद्दा हो त्यो ब्लगले बजारमा छताछुल्ल पारिदिएको एक नाथे नारीवाद र दुई नाथे लगायत १२ सत्ताइस् नाथे नारीवादको। यसपाली देखिएको नारीवादले के स्पष्ट पार्‍यो भने जति पढे पनि, जति शिक्षित भए पनि पँधेरे गफ र जगल्टा लुछालुछबाट नारीहरु बाहिर निस्किन गाह्रै रहेछ। आखिरमा त्यही पँधेरे बाझाबाझ नै गर्न त किन दु:ख गरेर पढ्न पर्थो र बाबै। लौ त आउनुस् हाम्रो छलफललाई त्यता केन्द्रित गरौं। हातमा फूलपाती लिनुस्।
पहिला, आदरणीय नारीवादीहरुलाई नारीवादलाई नाथे लेख्यो भनेर १२ थरीलाई गाली गर्न र १२ थरी पुरुषवादी अहंकारको कुहिएको गन्हाउने ब्लग हो भनेर गाली गर्न आह्वान गर्दछ। त्यसोगर्दा हाम्रो १२ थरीको प्रचार पनि हुन्छ र हामीलाई फाइदा पुग्छ। अब मूल बिषयमा प्रवेश गरौं र नाथे नारीवादका बारेका रमाइला पाटा खोतलौं।
एक नाथे नारीवाद
अस्ति त्यही मेटिएको ब्लगमा हेर्दा थाहा पाएको- एकनाथे नारीवादले भन्दो रहेछ, जिन्दगी के हो र? मरेपछि खरानी। त्यसैले बाँचुन्जेल मोज मस्ती गर्नी हो, चुरोट रौसी पिउनी हो, क्लबाँ नाच्ने हो, पुरुषसँग छातीमा छाती टाँसेर नाच्ने हो। ठेक्कापट्टा चल्ने चल्दैगर्छ, परेकाबेला बोल्नु परे नि बोलौंला, जे जे खोल्नुपर्छ खोलौंला तर न त रात न त विरात पिउने, झुम्ने हो नाच्ने हो। आखिर जिन्दगी के हो र? मरेपछि खरानी न हो। पुरुषभन्दा हामी कुनै पनि कुरामा कम छैनौं, त्यसैले हामी पुरुषसँग आमनेसामने भिड्नुपर्छ। यो नारीवादको पक्षमा आफूलाई यो देश, यो राजनीति बाल हो भन्ने टाइपका, आफू इलाइट देखिनुपर्ने तर कसैले इलाइट भने भने आफू मध्यमवर्गीय भएको, सुविधा नपाएको भन्दै लालीका पित्र गाउनेहरु पनि देखिए। (लालीका पित्र गाउनु– एउटा गाउँमा एकजना महिला थिइन्। उनलाई सबैले लाली भन्थे। जोसँग भेट भए पनि उनी आफ्नो घरमा दु:ख मात्र भएको सुनाउँदै बिलौना गर्थिन्, तर उनी उनले बिलौना गर्नेजति दु:ख पाएकी हुन्थिनन्। उनैलाई समर्पित गरेर आफू सुखी हुँदाहुँदै पनि दु:खी छु भन्नेलाई लालीका पित्र गाउने भन्न थालियो।)
दुई नाथे नारीवाद
दुई नाथे नारीवादले भन्छ- नारीवाद विशुद्ध हाम्रो ठेक्काको विषय हो। यसका असली हिमायति हामी हौं। अब नारीले घरको चौकठ नाघ्नुपर्छ। तर चौकठ नागेर पुरुषसँग छातीमा छाती टाँसेर नाच्नु नारीवाद होइन। असरी नारीवादले पुरुषको छातीमा छाती जोड्दैन, पुरुषभन्दा नारी यति अग्ली हुनुपर्छ कि उनीहरुको अनुहार हाम्रो छातीमा पुगोस्। पुरुषसँग हात समातेर नाच्ने हैन, हामीले पुरुषको चाकमा प्याट्ट हातले हान्दै नाच्नुपर्छ। यी पुरुषको काम के छ? आज अरबमा, इजरायलमा वा अन्त कतै, रुकुममा, रोल्पामा, डोल्पामा जताततै नारीमाथि दमन भएको, हिँसा भएको छ। त्यस्तोमा पुरुषसँग काँधमा काँध मिलाएर कसरी रक्सी पिउन सकिन्छ? हो, रक्सी पिउनुपर्छ, क्लब जानुपर्छ, चुरोट पनि तान्नुपर्छ तर पुरुषसँगै नाच्ने कदापी हुनसक्दैन। जिन्दगी मरेपछि खरानी भनेर चुपचाप बस्न सकिन्नँ। संसार कहाँ पुगिसक्यो, अनेक तौर तरिका निस्किसके तर हामी सँधै पुरुषको तल पर्ने कुरा सह्य हुँदैन।
एक नाथे र दुईनाथे नारीवादको फरिया तानातान र जगल्टा लुछालुछका बीचमा एउटा आदर्श नारीवाद पनि देखियो। यो आदर्श नारीवादका ठेकदारहरुको भीडन्तमा आफूलाई तटस्थ राख्न लागिपर्‍यो। यो नारीवादले भन्छ- नारीवाद कोही सिमीत समुहको वा यो वा त्योको ठेक्काको विषय होइन। यो हामी सबैको सामूहिक लँडाइँ हो- अहंकारवादी पुरुषसत्ता विरुद्धको समानताको लडाइँ हो, जुन हामी सबैले मिलेर लड्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी क्लबमा गएर पनि नाचौंला, सँगै रुकुम रोल्पाका दिदीबहिनीलाई पनि अगाडि ल्याउँला। त्यसैले चौतारामा बसेर आफ्नो गाँड कोराकोर गर्न छोडेर पितृसत्तात्मक जालो तोड्न अगाडि बढौं।
दुई जोइका पोइ, कुनापसी रोई
ओहोहोहो, यस्ता नारीवादी आक्कलझुक्कल देखिन्छन्। हतपति यिनीहरु सतहमा देखिँदैनन्। यी कस्ता नारीवादी भने एकनाथे, दुईनाथे, आदर्श सबै नारीवादीका जिग्री। सबैलाई नाम दिने क्यात, ब्लग पढेको भए थाहा पाउनुहुन्छ। यी नारिवादीलाई यस्ता फरिया उचालाउचालमा गाह्रो पर्छ। कसका पक्ष लिनू? एकतिर बोले अर्कोतिर फकाउँदाको हैरान, यता टाले उता भ्वाङ्, उता टाले यता भ्वाङ् हुने। लास्टाँ चेपिने यीनकै हो, जो जो अगडा गरे पनि यीनकै जिग्री पर्छन् :पी अनि त, साँझतिर भट्टीमा छिर्‍यो , दुई पेग चढायो अनि लेख्यो- प्रियहरुले यसरी गाँड कोराकोर गर्दा शत्रु हाँस्छन्, मेरो मनाँ पीडा हुन्छ।
बजारमा अनेक सामान पाइएजस्तै समाजमा पनि फरकफरकवादीहरु भेटिने नै भए। यही नाथे भिडन्तमा देखियो अर्को नारीवाद, खुच्चिङ् नारीवाद। यी नारीवादीहरु फरकफरक कित्तामा बसेर खुच्चिङ गरिरहेका थिए। एकथरी एकनाथेले क्या भेटे है भन्दै खुच्चिङ् गर्दैथिए अनि अर्काथरी दुईनाथेको झाँको झर्‍यो है यसपाली भन्दै खुच्चिङ गर्थे। यीनले आदर्श नारीवादमा जस्तो भाषण पनि छाँटेनन्। तर नथाहापाएजस्तो गरेर जगल्टा लुछालुछ हेरेर मनोरन्जन लिए। यीनको नारीवादमा कुनै चासो हुँदैन वास्तवमा, यी एकथरीका धुपौरे र अर्कोथरीका खुच्चिङे हुन्।
एउटा उखान छ नि- पाडो पाए पनि पाडी पाए पनि गोठालाई बिगौति। यो नाथे नारीवादको भिडन्तमा फाइदा भयो गोठालाहरुलाई। चट्ट गाइवस्तु चराउन चौरमा छोडेर चौतारामा बसेर नारीवादीहरुको भिडन्त हेर्न पाए। फरिया तानातान गर्दा तै केही देखिन्छ कि भन्दै निहुरीनिहुरी पनि हेर्दै थिए केही त। केही साममुम होलाजस्तो भए हुटिङ् गर्दै रेस्लिङ्को रेफ्रीजस्तो पोजिसन फेरिफेरि मनोरन्जन लिन्छ यो समुह। यो समुहको आफ्नै काम छ, आफ्नै ठेक्कापट्टा पनि छ। एक नाथे र दुईनाथे मिले पनि फाइदा यसैलाई, यी झगडा गरे नि फाइदा यसैलाई हुने भएकाले यसलाई बिगौति नारीवाद भनिएको हो।
१२ थरी यस्ता वाद सादमा विश्वास गर्दैन। १२ थरीले विश्वास गर्ने पाद हो। कृपया, चौतारामा बसेर कपाल लुछालुछ गर्दा र फरिया तानातान गरेकोबेला बल पर्दा पनि नपादिदिनु होला। हाम्रो मनोरन्जनको ऐसी कि तैसि हुन्छ। अनि यसरी भिडन्त गर्दा अर्को पक्षको फरिया, ब्लाउज च्यात्न सक्नुभयो भने, अझ भित्रको ब्रासम्म पनि च्यात्न सक्नुभयो भने स्वतन्त्र दर्शकहरुले तपाइँहरुबाट भरपुर मनोरन्जन लिन सक्थे।
blog, controversy, feminism
घर न घाट, पलायनवादी झाँट
One thought on “एक नाथे नारीवाद, दुई नाथे नारीवाद”
मेरो कलम says:
नसक्नु भो के खाएपछि यस्तो लेख्न आउछ !